Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka kala duwan » Cycas Wuu Ku Faraxsan Yahay Horumarka Iswisarland
Cycas Hospitality waxay sii waddaa horumarinta barnaamijkeeda ballaadhinta ee hamiga leh, iyadoo bishan saxeexday huteelkii ugu horreeyay ee Swiss ah.
119-qol Holiday Inn Express & Suites Sion waxa ku shaqayn doona hawlwadeenka ku guulaysta abaal marinta reer Yurub ee hoos yimaada heshiiskii kirada kowaad ee ay la galeen koox maalgashi oo ah Maaraynta Hantida Credit Suisse.
Cycas iyo IHG Huteelada & Dalxiiska ayaa iska kaashaday inay keenaan fikrad labaad Holiday Inn Express & Suites Switzerland.
Cycas portfolio waxay hadda daboolaysaa 6 wadan oo Yurub ah - Belgium, France, Germany, Netherlands, Switzerland, iyo UK.
Marka la furo dayrta 2024, guriga cusub ee la dhisay wuxuu bixin doonaa isku darka 95 qolal Holiday Inn Express oo caadi ah iyo 24 suuli oo leh jikada oo ku taal saldhigga tareenka ee Sion, oo ay weheliso makhaayad dabaq ah oo ku taal si ay uga faa'iidaysato goobta firfircoon ee gudaha degmada cusub ee Cour de Gare iyo hoolka riwaayadaha cusub. Martidu waxay sidoo kale awood u yeelan doonaan inay ka faa'iidaystaan ​​24/7 jimicsiga iyo qolka shirarka.
Hudheelkani waxa uu udub dhexaad u noqon doonaa horumar balaadhan oo ganacsi oo la doonayo in lagaga faa’iidaysto mawqifka Sion ee ah xudunta dhaqaalaha iyo ganacsiga ee gobolka iyo isku xidhka magaalada oo firfircoon iyo magaaladii hore.
Mashruuca cusub ee Cour de Gare, oo uu hogaaminayo Comptoir Immobilier, ayaa isu keeni doona in ka badan 10,300m² oo xafiisyo ah, 300 guri iyo 5,700m² oo tafaariiqda ah. Dhismaha ayaa sidoo kale ka mid noqon doona mid ka mid ah riwaayadaha iyo hoolalka shirarka ee ugu weyn gobolka Valais - oo ku dheggan hoteelka - iyo baarkin dhulka hoostiisa ah oo loogu talagalay 625 baabuur.
Hudheelka waxa kale oo si wacan loogu meeleeyay machadka cilmi-baadhista sayniska ee EPFL Valais Wallis – oo ah xarun heersare ah oo ay ka shaqeeyaan in ka badan 400 oo shaqaale ah - oo ay ku jirto xarunteeda Energypolis School of Engineering.
Maaddaama ay tahay caasimadda Valais - oo ah mid ka mid ah gobollada ugu caansan ee loo dalxiis tago ee Switzerland - hudheelka cusub wuxuu ku habboon yahay in laga faa'iidaysto goobaha barafka ee Yurub ee caanka ah. The Four Valleys, oo ah goobta barafka ugu weyn ee Switzerland, hadda waa 30 daqiiqo oo baabuur, laakiin waxaa laga yaabaa in xitaa la heli karo dhowr sano gudahood marka la furo hoteelka haddii mashruuc cusub oo baabuur fiilada ah uu sii socdo oo si toos ah 20-daqiiqo xiriir uga socda saldhigga deriska ah ee jiirada.
Sion sidoo kale waxay saacad u jirtaa Zermatt, Verbier, Chamonix Mont-Blanc iyo Portes du Soleil. Waa meesha ugu weyn ee isku xirta barafka barafka ee adduunka.